सुन्दरी कायली कसरी भइन् २१ वर्षमै अर्बपति ?::Nepali News Portal from Nepal
सुन्दरी कायली कसरी भइन् २१ वर्षमै अर्बपति ?
भनिन्छ नि, दिनको संकेत बिहानीले गर्छ। सन् २०१३, १४ र १५ मा फक्स टिभीले प्रदान गर्ने प्रतिष्ठित अवार्डका लागि उनी निरन्तर तीन विधामा मनोनित भइन्। सन् २०१३ को ‘च्वाइस टिभी रियालिटी स्टारः फिमेल’ अवार्ड जितिन्।बुधबारदेखि विश्वभरि चर्चा पाइरहेकी कायली जेनरको सफलता यात्रा त्यहीँबाट सुरू हन्छ। हो उनी मुलत: मोडल हुन्, टेलिभिजन पर्सनालिटी हुन्। तर पछिल्लो समय उनको चर्चा त्योभन्दा फरक कारणका लागि भइरहेको छ। कायली जेनर व्यवसायी हुन्, उद्यमी पनि हुन्। र उनी विश्वकै कान्छी डलर अर्बपति बन्न सफल भएकी छिन्। विश्वका धनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने अमेरिकी म्यागेजिन फोर्ब्सले यो वर्ष २ हजार १५३ जना अर्बपतिहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ। सन् २०१९ मा कम उमेरमै डलर अर्बपति बन्नेको संख्या ७१ छ। त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी अर्बपति ४० वर्ष मुनिका छन्। हो, यही ४० वर्षमुनिका अर्बपति मध्येकी कान्छी अर्बपति हुन् कायली जेनर, जो अहिले मात्र २१ वर्षकी छिन्।अर्को महत्वपूर्ण कुरा त यी सुन्दरी पुर्ख्याैली सम्पत्ति पाएर फोर्ब्स अर्बपति सूचीमा परेकी हैनन्। आफ्नैँ व्यवसायले उनलाई यो उचाइ दिलाएको हो। त्यो पनि पछिल्लो तीन वर्षको कमाइले।
कायलीको व्यावसायिक यात्रा
फोर्ब्सका अनुसार उनले सन् २०१५ मा २९ डलरबाट ‘लिप किट्स’ बेच्न सुरु गरेकी थिइन्। सन् २०१८ मा उनले ३ सय ६० मिलियन डलरको बिक्री गर्न सफल भइन्। नोभेम्बर २०१८ मा जेनरले शृंगारका सामान बिक्री गर्ने ‘अल्टा रिटेलर’सँग ‘डिस्ट्रिब्युसन डिल’ गर्दै ६ हप्तामै ५५ मिलियन डलरको करोबार गरिन्। ‘कायली कस्मेटिक्स’को शतप्रतिशत स्वामित्ववाली उनी यही शृंगारिक सामान बिक्री व्यवसायबाट विश्वकै कान्छी डलर अर्बपति बन्न सफल भएकी हुन्। कायली कस्मेटिक्सले गत वर्ष आफ्नो सामान बिक्रीबाट ३६ करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको थियो। त्यसमध्ये २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर १५ हजार ‘लिप किट्स’ (शृंगारिक सामान बोक्ने झोला) उत्पादनका लागि उनले लगानी गरेकी छिन्। करोडौं युवाकी धड्कन बनेकी कायलीका सामाजिक सञ्जालमा १७ करोड ७० लाख फलोअर छन्। सन् १९९७ को अगष्ट १० मा अमेरिकी राज्य क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलसमा कायटलिन जेनर र क्रिश जेनरको कोखबाट जन्मिएकी उनी किशोरावस्था पार गर्दा नगर्दै टेलिभिजन पर्सनालिटी, मोडल हुँदै उद्यमीतिर लागिन्। व्यवसाय थालेको तेस्रो वर्ष नपुग्दै कायली १ बिलियन डलर सम्पत्तिकी मालिक बन्न सफल भइन्। यस्तो सफलता थोरैले पाउँछन्। आफैँ उदाउन चाहनेहरूका उर्बर भूमि अमेरिकामै पनि निकै कर्मठ व्यक्तिले मात्र यस्तो सफलता चुम्न सक्छन्। उनको यो व्यवसायिक सफलता विश्वभरिकै युवतीहरूका लागि प्रेरणादायी छ।
टेलिभिजन पर्दामा त जो कोही क्षणभरमै अर्बपति बन्नसक्छ तर जेनरले टेलिभिजनको पहिचान कायम राख्दै वास्तविक जीवनमै अर्बपति बनेर देखाइदिइन्। ‘किपिङ अप विथ द कार्दाशियन’ टिभी शोलाई सफलता दिलाएको पनि ‘कायली कस्मेटिक्स’ व्यवसायले नै हो। नर्वेजियन धनाढ्य २२ वर्षीया अलेजान्द्रा एन्डरसनसँग उनीसँगभन्दा बढी सम्पत्ति छ। तर कायलीका कारण उनी सबैभन्दा कान्छा डलर अर्बपति बन्न चुकेका छन्। २३ वर्षीया उनकै दिदी क्याथारिनको हकमा पनि त्यस्तै भयो। क्याथरिन र कायली दुवै अर्बपति सूचीमा परेका छन्। शृंगार सामानको व्यवसायले पाएको यो उचाइले कायलीलाई चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई समेत माथ गरेको छ। जुकरबर्गले २३ वर्षमा कायलीकैजस्तो कम उमेरको अर्बपति दर्जा पाएका थिए। विश्वभरि चर्चा कमाएका थिए।
‘यस्तो सफलताको अपेक्षा थिएन’
जेनरले आफ्नो सफलताबारे फोर्ब्ससँगको कुराकानीमा भनेकी छिन्, ‘मैले यस्तो केही अपेक्षा गरेकी थिइनँ । मैले भविष्यको यस्तो लक्ष्य पनि राखेकी थिइनँ । तैपनि यस्तो सूचीमा पर्दा साँच्चिकै खुसी लागेको छ। कसैले आफ्नो काँधमा धाप मारिदिएजस्तो लागेको छ।’
हुन त व्यावसायिक उचाइ पाउनुअघि नै उनी लाखाैं युवाको धड्कन भइसकेकी थिइन्। अमेरिका र अमेरिका बाहिर पनि। सन् २०१६ डिसेम्बरको एउटा घटनाबारे न्युयोर्क टाइम्स लेख्छ: डिसेम्बरको एक बिहान न्यानो घाम लागिरहेको थियो। लस एन्जलसको कानोगा पार्क सेक्सनस्थित एउटा धपधपाउँदो शपिङ मल अस्तव्यस्त देखिन्थ्यो। हजारौँ युवतीहरु (केही युवक) धेरै टाढाका राज्यहरूबाट यात्रा गरेर त्यहाँ आएका थिए। वेस्टफिल्ड टोपान्गा मलमा उनीहरू पूरै रात पार्किङमै सुते। बिहान ठीक १० बजे एकत्रित भएर भुइँतला अगाडिको अस्थायी स्टोरअगाडि पुगे। त्यसको केही घण्टापछि सामान किन्नेहरू धेरैजसो सर्पजस्तो लाइनमा आफ्नो स्मार्टफोनमा झुण्डिरहेका देखिन्थे।
मल मानियाको खास कारण के थियो त ?
यसको एउटै कारण थियो– त्यहाँ १९ वर्षकी रियालिटी टिभी स्टार कायली जेनरको ‘कायली पपअप शप’को अनावरण हुँदै थियो। त्यसकै लागि सैयाैं युवतीहरू हजारौं माइल ड्राइभ गरेर अघिल्लै दिन वेस्टफिल्ड टोपान्गा मल आइपुगेका थिए। स्न्यापच्याट प्रेरित उनको नामको त्यो कायली कस्मेटिक्सको बजारीकरण अहिले ‘इ–टेल फेनोमेना’ भएको छ। सेप्टेम्बरमा भएको न्युयोर्क फेसन विकमा मिस जेनरले आफ्नो किनबेच गर्ने थलो मानियावरिपरि बनाउन सामाजिक सञ्जालको राम्रो प्रयोग गरेकी थिइन्। त्यतिबेला आफ्नो स्टोर खोल्न आउनेबित्तिकै उनले भनेकी थिइन्, ‘एउटा साम्राज्य, सबै तपाईंहरुको लागि।’ वास्तवमा यो नै उनको २०१९ को संसारका अर्बपतिहरुको सूचीसम्म पुग्ने बलियो तयारी थियो। (एजेन्सीको सहयोगमा)
राहुलले स्वीकारे हार, मोदीलाई दिए बधाई